Warqad Furan oo Labaad oo ay soo saareen Saraakiisha Sare ee UNWTO waxay ku boorinayaan dalalka xubnaha ka ah inay oggolaadaan doorashada Xoghayaha Guud ee cusub oo habboon
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Warqad Furan oo Labaad oo ay soo saareen Saraakiisha Sare ee UNWTO waxay ku boorinayaan dalalka xubnaha ka ah inay oggolaadaan doorashada Xoghayaha Guud ee cusub oo habboon
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka cusbooneysiiyay • Wtn
Warqad labaad oo furan oo loo diray dalalka xubnaha ka ah UNWTO ayaa waxaa soo gudbiyay shaqaalihii hore ee sare ee UNWTO iyo saraakiil iyada oo ugu baaqaysa wadamada xubnaha ka ah inay hadda wax ka qabtaan. Warqadda ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo qodobka 43 ee Xeer-hoosaadka Golaha Guud, waxaad codsan kartaa cod sir ah oo ku saabsan xaqiijinta ajandaha Xoghayaha Guud ee shirka guud ee soo socda ee Madrid. Haddii codbixintu sidaas go'aamiso, waa awooda Golaha Fulinta inay bilaabaan hannaan doorasho oo cusub oo habboon.
Saraakiisha sare ee UNWTO, oo ay ku jiraan 2 Xoghaye Guud oo hore ee UNWTO, ayaa markii ugu horreysay isu yimid Disembar 2020 waxayna u gudbiyeen warqad furan "WTN ee sharafta doorashada UNWTO" Waxaa hindisay Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee dhawaan la aas aasay xilligaas.
Maanta oo ay maalmo yar ka harsan yihiin Shirweynaha Guud ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, ayaa waxaa mar kale isugu yimid koox saraakiil sare oo ka tirsan hay’adda UNWTO, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah saraakiishii ku lugta lahayd ololaha WTN ee sharafta. Warqad Furan oo ku socota Wadamada Xubnaha ka ah UNWTO oo ku saabsan Warbixinta uu soo saaray Sarkaalka Anshaxa ee Maamulka Dhaqanka iyo Dhaqanka ee Ururka.
Warqada loo diray wadamada xubnaha ka ah UNWTO iyo wasiiradeeda dalxiiska ayaa ku boorinaysa wasiirada iyo ergada inay albaabada u furaan doorasho cusub oo sax ah oo loo qabto xoghayaha guud ee golaha guud ee soo socda.
Anaga oo ah shaqaalihii hore ee UNWTO ee hoosta ku saxeexan, waxaanu jecelnahay in aanu u soo jeedino dawladaha xubnaha ka ah UNWTO natiijadii naxdinta lahayd ee ku jirtay warbixinta* ee uu soo saaray Sarkaalka Anshaxa ee ku saabsan hoos u dhaca mabaadi'da anshaxa ee ka jira maamulka sare ee UNWTO ee hadda jira.
* Warbixinta Sarkaalka Anshaxa, ee ku taariikhaysan Ogosto 23, 2021 oo loo gudbiyay Golaha Guud iyada oo loo marayo dukumeenti A/24/5(c) "Warbixinta Kheyraadka Aadanaha"
Iyada oo ku saleysan natiijooyinkaas niyad-jabka ah, waxaan u soo jeedineynaa Dowladaha xubnaha ka ah inay xisaabta ku darsadaan ka hor inta aysan tixgelin dib-u-soo-celinta Xoghayaha Guud ee hadda jira muddada 2022-2025 ee Golaha Guud ee XXIV ee Madrid, Spain; kuna martiqaad Xafiiska Qaramada Midoobay ee Adeegyada Kormeerka Gudaha si uu u sameeyo baadhitaan gudaha ah oo dhamaystiran.
Waxaan in muddo ah ka walaacsanaa maamulka anshaxa ee Ururka, oo hadda la xoojiyay lana xaqiijiyay, warbixinta aan kor ku soo xusnay.*
Halkan guji si aad u aqriso warbixinta.
Warbixinteeda Golaha Guud, Sarkaalka Anshaxu wuxuu qeexayaa isbeddel walaac leh oo ku yimaada hab-dhaqanka maamulka ee Ururka. Gaar ahaan, warbixintu waxay tiri “Haddaba waxaa walaac iyo murugo isa soo taraysa, markii ay u kuur gashay sida hufnaanta iyo hufnaanta leh ee lagu dhaqmi jiray maamulladii hore, arrimaha dallacaadda, dib-u-soocidda iyo magacaabista, ay si lama filaan ah u joojiyeen taasoo fursad u siinaysa mad-madow iyo maamul aan loo meel dayin.. "
Waxaan aaminsanahay in, sida uu sheegay Sarkaalka Anshaxa, iyada oo kormeerka saxda ah lagu hirgelin karo oo kaliya dhaqaale ku filan iyo maskax furan, maamulka mugdiga ah iyo hab-raacu wuxuu u muuqdaa hab-dhaqanka jira iyo dhaqanka joogtada ah ee hoggaanka hadda jira.
Tani waxay si gaar ah u noqonaysaa niyad jab marka bilawga xilka Xoghayaha Guud ee hadda jira, May 2018, ee Golaha Sare ee 108aad, "Xoojinta Maamulka Gudaha" la siiyay Dawladaha Xubnaha ka ah mudnaanta ugu sareysa ee maamulka gudaha ee Ururka.
Igaar ahaan, dukumeentiga CE/108/5(b) rev 1 (Aragtida maamulka iyo mudnaanta ) , waxaa la sheegay in dhaqanka suuban ee Ururada uu yahay kan ugu muhiimsan, xitaa in la magacaabo wakhtigaas Sarkaalka Anshaxa ee saxeexa ayaa yiri warbixinta.
Markaad akhrinayso warbixinta Sarkaalka Anshaxa, uma eka in dhaqanka anshaxu uu ahaa dareenka ugu muhiimsan.
Tani waxay ku soo beegantay waxii ugu sarreeyey, annagoo ah shaqaalihii hore, si toos ah ayaan uga markhaati kacnay, oo ah xaalado gaar ah go'aannada maaraynta aan sharciga ahayn ee ka soo baxa maamulka UNWTO ee hadda jira, kuwaas oo qaarkood xitaa laga dacweeyay Maxkamadda Maamulka ILO. Si kastaba ha ahaatee, dhawrsanaan iyo xushmad dartood ayaanu u doorannay in aanaan magacyo sheegin.
Tusaalaha kale ee dabeecadda su’aali ka taagan tahay ee Xoghayaha Guud ee hadda jira waxa ay ahayd soo jeedintiisa ah in la sii amba qaado Golaha Fulinta, kaas oo ay ahayd in ay doortaan Xoghayaha Guud ee afarta sano ee soo socota, shan bilood ka hor jadwalkiisa sharciga ah (Janaayo halkii May/ June).
Hawshani waxay si wax ku ool ah uga hor istaagtay Dawladaha xubnaha ka ah inay soo bandhigaan musharixiinta wakhti yari, aakhirkana hal dawlad kaliya ayaa soo gudbin karta musharraxnimo buuxda, marka la barbar dhigo tirada musharixiinta ansaxsan ee lagu soo bandhigi karo doorashooyinkii hore. Oo markii la sheegay in musharraxa uu ka soo muuqday Madrid kulanka Golaha Fulinta, waxaa laga mamnuucay inay ka qaybgasho dhacdo bulsho.
Intaa waxaa dheer, waxaa si weyn loo ogaa in taariikhda la doortay ay ahayd mid aad looga xumaado maadaama wafdiyo badan aysan imaan karin sababtoo ah xeerarka faafa ee Spain wakhtigaas. Sababaha lagu eedeeyay ayaa ahaa in shirka Golaha Fulinta uu ku soo beegmayo Bandhigga Dalxiiska Caalamiga ah ee Madrid (FITUR), laakiin markii dawladda Isbaanishka wax yar ka dib u guurtay FITUR ilaa May, Xoghayaha Guud wuxuu diiday inuu wax ka beddelo taariikhaha kulanka Golaha si waafaqsan. .
Sidoo kale, xisaab xidhkii la baadhay ayaa la horgeyn kari waayey Golahaas sidii uu xeer-hoosaadku u igmaday, taasina waxay keentay in shirku noqdo mid aan caadi ahayn, isla markaana su’aal la geliyo sharci ahaanshiyaha hab-raaca doorashada, sida ay caddeeyeen laba Xoghaye oo hore oo hore u ahaa Xoghaye Guud. warqad.
WTN ee Xushmadda doorashada UNWTO
Waxa kale oo xusid mudan in masuulka Anshaxu uu si cad u sheegay in aanay ka soo bixi karin hawlihii loo igmaday ee maamulka hadda jira, taasina ay keentay in Xafiiska Anshaxa laga raro meel ka baxsan Ururka.
Marka la eego arrimaha aan kor ku soo xusnay, waxaan idinku baaqaynaa in aad si gaar ah u dhugtaan dhaqanka cabsida iyo aargoosiga ah ee lagu hayo shaqaalaha UNWTO, taasoo keentay hoos u dhac joogto ah iyo luminta agabka qiimaha leh ee shaqaalaha, kuwaas oo aan ku dhiiran in ay ka cawdaan, isla markaana ay qaataan. go'aamada lagama maarmaanka ah ee la xidhiidha hawlahooda, sida adiga, xubin ka ah Ururka, aad ka filan lahayd iyaga.
Si taas loo gaaro, oo waafaqsan qodobka 43 ee Xeer-hoosaadka Golaha Guud, waxaad codsan kartaa cod qarsoodi ah oo ku saabsan qodobkan Ajandaha, haddii codbixintu sidaas go'aamiso, amarto Golaha Fulinta inuu bilaabo mid cusub oo habboon. habka doorashada.
Waxaan rumeysannahay in maamulka "aan sharci ahayn iyo madmadow", sida uu iftiimiyay Sarkaalka Anshaxa, uusan meelna ku lahayn hay'ad kasta oo Qaramada Midoobay ah, oo ay ku jirto UNWTO - Ururkaaga - kaas oo loo qorsheeyay inaad ka ilaaliso maamul-xumada iyo xadgudubka.
Sidaa darteed, waxa aad rabi kartaa in aad xisaabta ku dartid dhammaan waxyaabaha kor ku xusan marka aad tixgalinayso Ajendaha Shayga 9aad ee Magacaabista Xoghayaha Guud ee muddada 2022-2025, oo aad dib u milicsato nooca maamulka aad doonayso in aad aragto afarta sano ee soo socota. Mustaqbalka Ururku gacantaada ayuu ku jiraa.
Madrid, Noofambar 15, 2021
Taleb Rifai, Xoghayaha Guud ee UNWTO 2010-2017
Adriana Gaytan, Madaxa UNWTO ee Warfaafinta iyo Tignoolajiyada Isgaarsiinta 1996-2018
Carlos Vogeler, Agaasimaha Fulinta ee UNWTO ee Xiriirka Xubnaha 2015-2017, Agaasimaha Ameerika 2008-2015, iyo Madaxweynihii hore ee Xubnaha Xiriirka
Emi MacColl, Shaqaalaha UNWTO ilaa 1980, Chef de Cabinet, Xafiiska Xoghayaha Guud 1996-2017
Esencan Terzibasoglu, Agaasimaha UNWTO, Maareynta Maareynta iyo Tayada, 2001-2018
Eugenio Yunis, Shaqaalaha UNWTO ilaa 1997, Agaasimaha Barnaamijka iyo Isuduwidda 2007-2010, Sarkaalka Anshaxa 2017-2018 iyo xubin hore oo ka tirsan Golaha UNWTO ee Anshaxa Dalxiiska
J Christer Elfverson, Lataliyaha Gaarka ah ee UNWTO ee Xoghayaha Guud 2010-2017 iyo shaqaalihii hore ee Qaramada Midoobay tan iyo 1970
John Kester, Shaqaalaha UNWTO ilaa 1997, Agaasimaha Tirakoobka, Isbeddellada iyo Siyaasadda 2013-2019
JGarcía-Blanch, Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda ee UNWTO 2009-2018, iyo shaqaalihii hore ee IMF iyo WIPO
Marcio Favilla, Agaasimaha Fulinta ee Barnaamijyada Hawlaha iyo Xiriirka Hay'adaha 2010-2017
Mudane. Wasiirada: Mustaqbalka ururkan gacantiina ayuu ku jiraa.